akuwona, akuwona umkhuhlane: i-t-mobile ne-at & t ziphansi kuma-texas nakwezinye izingxenye zezwe
none Izindaba Nokubuyekezwa Akuwona wena, kungokubanda: I-T-Mobile ne-AT & T ziphansi eTexas nakwezinye izingxenye zezwe
QAPHELA # 2, Februwari 17: Njengoba kungapheli ukuphela 'kwezimo zesiphepho sasebusika' ezibonwa kuma & apos; izifunda ezahlukahlukene kulo lonke elase-US ', konke lokho i-T-Mobile engakuthembisa ukuthi' ukubhekisisa isimo 'futhi' uqhubeke usebenza ubusuku nemini ngemizamo yokubuyisela. '
Ngeshwa, lokho kusho ukuthi amasayithi amaningi ahlala phansi, iningi lawo atholakala eDallas, eHouston nase-Austin, yize amanye amasayithi amaningi ebuyiselwe emahoreni angama-36 edlule. Ngamanye amagama, ukufinyelela kwakho emisebenzini ejwayelekile engenazintambo manje eTexas kuncike kakhulu enhlanhleni yakho. Okubi kakhulu ukuthi kukhona esinye isiphepho esinamandla, okungenzeka sibe 'nemithelela ebanzi ezifundeni eziningi eMid-South.' Futhi bathi u-2020 mubi.
##BUYEKEZA: Ngenkathi i-T-Mobile ingahle ingabi khona ngokuphelele isimo seTexas, its imizamo yokubuyisela insiza engenantambo sekuvele kuthathwe (okuyingxenye) ephumelele e-Austin, lapho & apos; amanye amasayithi 'abuyiselwe ngokusemthethweni ku-inthanethi .
Ezinye izimakethe kulindeleke ukuthi zilulame ngokushesha, kepha okwamanje, amakhasimende acelwa ukuthi azame ubuchwepheshe bokushayela i-Wi-Fi esikhundleni sokuthembela ekuxhumekeni kwamaselula wendabuko (uma kungenzeka), kanye nokugcina izingcingo zibe 'okungenani futhi zifushane ngangokunokwenzeka 'noma uthumele imiyalezo esikhundleni sokwenza izingcingo lapho lezo zinsizakalo zisebenza ukunciphisa umthwalo wenethiwekhi nokucinana. Indaba yethu yasekuqaleni ilandela ngezansi.
Ngaphambi kokuthi amakhasimende amasha we-T-Mobile aphume ayothenga amafoni, engeze imigqa yesevisi, noma enze olunye ushintsho kuma-akhawunti awo Izitolo ezihamba phambili ze-Buy and Walmart , njengamanje akuwona umqondo omuhle ukuphuma ngaphandle ezindaweni eziningi esikhathini.
Ngenxa yokubanda okukhulu eTexas, ngokwesibonelo, cishe imindeni eyizigidi ezimbili esifundeni sobungani ayinamandla kusukela ngoMsombuluko ekuseni, okuyi iziphathimandla zendawo nezinkampani ezisetshenziswayo zilindele ukuqhubeka kuze kube sebusuku futhi mhlawumbe kuze kube ngoLwesibili ntambama.
Njengokungathi lokho kwakungekubi ngokwanele, ngokuqinisekile kubukeka njengamazinga okushisa ashubisa umnkantsha emadolobheni anjengeSan Antonio, iDallas, iHouston, iAustin, neCorpus Christi (ukubala nje abambalwa) kungenzeka ukuthi angqongqoze amakhasimende amaningi angenazintambo ngokuphelele ku-grid ngesikhathi lamahora asevele ezama. Ngokusho kweDowndetector, ipulatifomu edumile eku-inthanethi esetshenziselwa ukubika, ukulandelela, nokuqapha ukuphuma kwezinsizakalo ezahlukahlukene namawebhusayithi, womabili I-T-Mobile futhi I-AT & T. babhekene nezinkinga ngesikhathi sokuloba.
Ngokwedumela layo, kubonakala sengathi iMagenta ibiphethe lezi zinkinga eziqondakala ngokuphelele ngokushesha ngezwi likaMongameli wayo Wezobuchwepheshe. Ngeshwa, ngenkathi ama-T-Mo & apos; s & apos; amaqembu 'kuthiwa' asebenza kanzima ukubuyisa insizakalo 'kuma & apos; izindawo eziningana zezwe' ezithinteke ngenxa yokunqamuka, UNeville Ray ayikho esimweni sokwenza noma yiziphi izithembiso eziqinile (noma ezingacacile) okwamanje mayelana nesikhathi (noma usuku) lapho inethiwekhi engenantambo izosebenza futhi.
Ngokwemvelo, zombili izinsiza ze-intanethi nezingcingo ezishayelwa ngezwi zibonakala zithinteka kwiningi le- I-T-Mobile ababhalisile abakwaziyo ukwenza ubunzima babo baziwe. I-Oregon iyisifunda sesibili esishayeke kakhulu ngalezi zinto kuT-Mobile naku-AT & T, yize ngobuchwepheshe, 'uMa Bell' kusamele avume obala ukuthi kukhona noma yiziphi izinkinga ezisabalele. Kwazi bani, mhlawumbe ukuxhaswa kwamakhasimende okuphatha neziteshi ze-PR akunagesi nokufinyelela okungenantambo njengoba sikhuluma.
Okwamanje, Izimangalo zeVerizon inethiwekhi yayo 'isebenza kahle' lapho kubhekene 'neziphepho zasebusika' ezweni lonke, okusolwa ukuthi zibe 'nomthelela omncane' ekusebenzeni kweBig Red & apos; s. ' Isitatimende sibonakala sihambisana nokuthi yini Abasebenzisi be-Downdetector bayabika , okungenani okwamanje.
Okungukuthi, zimbalwa izikhalazo ezenziwe emahoreni okugcina ezifundazweni eziningi, ezinye zazo okungenzeka azihlangene nakancane nesimo sezulu esibandayo nokuphela kukagesi okuhlobene. Sizoqiniseka ukuthi sigcina izindlebe zethu zimile emahoreni ambalwa alandelayo futhi sikulethele konke okwenzekayo kulesi simo esingesihle. Okwamanje, uma ukwazi nokufunda lokhu, hlala uphephile, uhlale ufudumele, mhlawumbe ungahluleli iT-Mobile futhi I-AT & T. ngokhahlo kakhulu ... kulokhu.
i-velodyne vleve ekhanda lendlebe
Umthala we-samsung z flip 3
amadili omakhalekhukhwini abamnyama bangolwesihlanu
I-Fortnite ekugcineni ingeza ukuxhaswa kwesilawuli kwe-iOS ne-Android ngokuvuselelwa kwakamuva
Isiphequluli sobumfihlo iTor isiyatholakala ku-Android, kepha asizi ku-iOS
Izinhlelo ezintsha zeMetro by T-Mobile & apos; zikhishwa ngedatha ephindwe kabili, okungeziwe okungenamkhawulo
Lezi zingcingo zizoyeka ukusebenza kuT-Mobile ngenyanga ezayo
I-iPad WiFi vs iPad Cellular: iyiphi okufanele uyithole?
I-Amazon isebenza ngokuthenga, thola ukuthengiswa kwamahhala ku-Echo Dot Kids Edition ethandwayo
IMetroPCS inikela ngama-smartphones e-Android amahhala uma ushintshela kuhlelo lwayo lwe-LTE olungenamkhawulo
Ishaja ye-Apple iPhone 12 MagSafe ibona isaphulelo esingajwayelekile e-Amazon
Uchungechunge lwe-Galaxy Note 20: Izici ezincane esilahlekile futhi esizitholile